Ucwaningo olusha luveza ukuthi i-noveli coronavirus COVID-19 ingahlala emoyeni isikhathi esingamahora amathathu, futhi ihlale ezindaweni ezifana neplastiki nensimbi engafakwanga izinsuku ezintathu.
Lolu cwaningo, olushicilelwe ku-medRxiv depository, luthi futhi leli gciwane lingahlala ezindaweni zethusi amahora amane nekhadibhodi isikhathi esingamahora angama-24. Ucwaningo lutholile ukuthi lingahlala insimbi engagqwali nepulasitiki nganoma yikuphi phakathi kwezinsuku ezimbili kuya kwezintathu.
"Imiphumela yethu ikhombisa ukuthi ukudluliswa kwe-aerosol ne-fomite kuyabonakala, ngoba leli gciwane lingahlala lisebenza emahoreni amahora amaningi futhi lisebenza ezinsukwini," abacwaningi babhale kulolu cwaningo, olungakabuyekezwa ontanga. .
Olunye ucwaningo olushicilelwe ngoFebhuwari lwaphetha ngokuthi uma i-COVID-19 ifana namanye ama-coronavirus, njenge-SARS noma i-MERS, ingahlala ezindaweni ezinjengezinsimbi, ingilazi kanye nepulasitiki izinsuku ezingafika kweziyisishiyagalolunye, kubika i Fox News phambilini. Ngokuqhathanisa, igciwane lomkhuhlane lingahlala kuphela endaweni cishe amahora angama-48.
Lolo cwaningo, olushicilelwe ku-Journal of Hospital Infection, luphakamise ukuthi ama-coronavirus "angafakwa kahle" kwizibulala magciwane eziqukethe "amaphesenti angama-62-71 ethanol, amaphesenti angama-0,5 we-hydrogen peroxide noma amaphesenti ayi-0,1 we-sodium hypochlorite kungakapheli umzuzu owodwa," engeza nokuthi amanye ama-ejenti ukuthi aqukethe "0.05-0.2% benzalkonium chloride noma amaphesenti angama-0,02 chlorhexidine digluconate awasebenzi kahle."
Njengamanje, awukho umuthi othize wokwelapha noma wokwelapha i-COVID-19.
Angaphezulu kuka-127,000 amacala e-COVID-19 aseqinisekisiwe emhlabeni wonke, kufaka phakathi ama-80,000 eChina nase-1,323 e-U.S, ngokusho kwedatha yakamuva.